Shorlarship Program လေးတွေ ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ အတွက် တင် ပေးလိုက်ပါတယ်.. .. ..
Masters Scholarships for Individuals from Myanmar, Lao PDR, and Cambodia
P.O. Box 196, Chiang Mai University Post Office, A. Muang, Chiang Mai, 50202, Thailand info@scholarshipsasia.org
Successful students will study at prestigious international universities in Hong Kong, Thailand or the Philippines.
Scholars will undertake masters degrees by coursework. Courses typically take one to two years to complete. Scholars must complete the course within the specified time period onafull time basis.
(1) hold an undergraduate degree at the time of application deadline with an excellent academic record; (2) bearesident of Myanmar, Cambodia or Lao PDR;
(3) have experience working in at least one of the fields listed above for development in their home country
(4) be proficient in language of instruction at APSC host university (usually English);
(5) be committed to returning to their home country after completion of the program to continue their work.
To apply or request more information contact info@scholarshipsasia.org or
write to us at: PO Box 196, Chiang Mai University Post Office, Chiang Mai, 50202, Thailand
* Ten-month co-tutored or co-managed component (preferably second
or third year) of PhD course
The objectives of the Eiffel excellence programme run by the French Ministry of Foreign and European Affairs remain unchanged. The first is to offer French higher-education opportunities for future public- and private-sector decision-makers in three priority areas: science; economics & management; and law & political science. (The Eiffel programme does not address students seeking careers in teaching or research; other programmes are available for students in these situations.) The second objective is to reach students from emerging countries (with priority on Asia, Latin America, Eastern Europe, the Middle East and new members of the European Union), though the PhD
scholarships also address students from industrialized countries.
CERTIFICATE PROGRAM IN COMMUNITY DEVELOPMENT AND CIVIC EMPOWERMENT (CDCE)
The CDCE program isathree-month intensive program designed to provide basic knowledge and skills for younger generations of community development workers, NGO managers and grassroots change-makers in the least developed countries of Southeast Asia. The trainees will learn the conceptual foundations of community development skills that are applicable in complex institutional environments. The training program will provide participatory and interactive classroom-based learning combined with field trips and observation tours to study the real-world activities and best practices of development NGOs and other civic groups.
Application Deadline - 31st October 2008 - applications must be received by this day.
The application form can be downloaded: You can check our website:
www.cdcep.org and www.soc.cmu.ac.th click CDCE program
Application Deadline . . . December 4, 2008
Option: Increasing Competencies for International
Communication (IC2) Program. . . . . March 2–27, 2009
EWKLP . . . . . . . . . . . . . . . . .March 30–June 26, 2009
Closing Ceremony . . . . . . . . . ............June 26, 2009
Fujitsu Scholarship Application Packet (104KB / A4)(including Recommendation Forms) http://www.fujitsu.com/downloads/JAIMS/document/FAPSP_EWKLP2008-2009_Application_Packet.pdf
EWKLP Application Packet (63KB / A4) http://www.fujitsu.com/downloads/JAIMS/document/EWKLP_Application_Packet_2008-2009.pdf
မလေးရှားမှာ ပညာသင် ကြားလိုသူများ အတွက် သိသမျှ လက်ဆငိ့ကမ်းဆွေးနွေး ကြရအောင်။
တကယ်တော့ မလေးရှား က သူ့ နိုင်ငံသား မလေး (Malay) တွေ ကို ထောက် ပံ့နေရတာနဲ့ ပဲ သူများနိုင်ငံသားကို အထောက်အပံ့ ပေးတာတော်တော်နည်းတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခုလို့ ပြောရမှာပါ။
လုံးဝ မထောက်ပံ့ တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရှိတော့ရှိတယ် ရှားတယ်ပေါ့။ တော်တော်လေးရှား ပါတယ်။
ကျွန်တော် ခုဆွေး နွေးချင်တာက Public University ကြီးတွေ အကြောင်း ပဲ ပြောမှာပါ။ Private College လေးတွေက တော့ အမျိုးမျိုး ကြော်ငြာ နေကြတာဆိုတော့၊ သူတီုးကြော်ငြာနေတဲ့ Scholarship ဆိုတာတွေကို မဝေဖန် မဆွေးနွေး လိုပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မလေးရှားက အများဆုံး ရနေတဲ့ Scholarship က ဘာသာရေးအရ ပေးတဲ့ Scholarships တွေပါ။ သက်ဆိုင်ရာ (မူဆလင်) ဘာသာဝင်များအတွက် သီးသန့် ဖြစ် သလို တော်တော် လေးလဲ ရကြတာတွေ့ရပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ Under-grade ကျောင်းသားတွေကို တောင်ပေးလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ နီးစပ်ရာ ဘာသာရေး အဖွဲ့ တွေ ကို ချဉ်းကပ် အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်တမျိုးကတော့ International Foundation တွေဖြစ်တဲ့ Asian Foundation, Japan Foundation တို့ ကပေးတဲ့ SEASREP Scholarship လို၊ ASEAN Scholarship လို မျိုးရှိပါတယ်။ သူတို့ ကို လျောက်ဖို့ အတွက် က သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းတွေမှာ လက်ခံ တဲ့ စာရထားပြီး သား၊ ကျောင်း အပ်ထား ပြီးသားတွေကို ပေးတာမျိုးပါ။
SEASREP က Program ၄ မျိုးလောက် ထိ ရှိပြီး Language Training အတွက်လဲ လျောက်နိုင်ပါတယ်။ SOROS Foundation ကနေ ပေးနေတဲ့ Funding ကလည်း တော်တော် လေး အရများ ကြပါတယ်။ ခုပြောတဲ့ Foundation တွေက ကျွန်တော် သတိရ သလောက် ပြောတာပါ။ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အသေးစိတ် အခက်အလက်တွေကို အဆင် ပြေ သလိုဆက်တင်ပေးသွားပါမယ်။
နောက် တမျိုးတော့ ကျောင်း တွေ က နေ သီးသန့် ပေးနေတဲ့ Scholarships တွေရှိ နေပါတယ်။ ဥပမာ PETRONAS ကနေပေးနေတဲ့ Under-Grade scholarships မျိုးပေါ့။ သူကတော့ အလုပ် Bond ထိုး၇တယ် လို့ကြားပါတယ်။ နောက် University of Malaya, Asia-Europe Institute ကနေပြီး နှစ်စဉ် Master Program (၄) ခုအတွက် Scholarship တွေ ပေးနေ သလို မြန်မာတွေလဲ တော်တော် ရကြပါတယ်။ Master Programs တွေ ကတော့ : International Master in Regional Integration; International Master in Small and Medium Enterprises; International Master in Information Management; International Master in ASEAN Study စတာပါပဲ။
Social Science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေ အတွက်လဲ PhD Scholarship တွေ Offer ပေးနေပါတယ်။ Master Courses တွေ က တော့ ပေးတဲ့ ငွေ ကော သင်ကြားမှု အပိုင်းက ကော တော်တော် ကောင်းပါတယ်။ PhD အတွက်က တော့ ပေးတာတော် တော် ကို နဲ ပါတယ်။
ရွှေးချယ်စရာ နောက်တမျိုးက တော့ နဲ နဲ လေး Risks ယူရပါမယ်။ ကိုယ် ငွေနဲ ကိုယ် ကျောင် အပ်ပြီးမှ Funding လိုက်ရှာရတာမျိုးပါ။ ဒါကတော့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အချိန်ပိုင်း Grants လေး တွေ Research Assistant/Demonstrator/Lab Assistant Jobs လေးတွေ ရှာပြီး ရပ်တည် ကြတာပါ။ မြန်မာ တော်တော် များများ အဲဒီလို နဲ့ ရပ်တည် အောင်မြင် သွား ကြပါတယ်။ အပိုင် ရထားပြီး သား Scholarship လိုတော့ စိတ်အေးမနေရ ဘူးပေါ့။ အမြဲတမ်း မျက်စိဖွင့် နားစွင့် နေရတာမျိုးပါ။ စိတ်လှုပ်ရှား စရာကောင်း လို့ Challenging Life အနေနဲ့ နှစ်သက်ကြသူတွေ အများကြီးပါ။
အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ဆက်ပြီး တင်သွားပေးပါမယ်။
University of Sydney has launched an exciting new international research scholarship initiative the University of Sydney World Scholars.
From 2008/09 up to 20 highly prestigious, competitive PhD scholarships will be awarded, covering the full costs of tuition fees for3years. Scholarship recipients will also be provided withacontribution of up to AUD2,000 towards the cost of their return international air fare to Sydney.
Prospective applicants requireafirm offer of admission from the University of Sydney before applying foraWorld Scholar award. A firm offer of admission must be received by3October 2008. World Scholar applications close on 17 October 2008. Further information regarding the program can be found at:
Should you have any question about this scholarship, please contact David Boyd, International Development Officer (Scholarships and Grants), at david.boyd@usyd.edu.au
International Development Manager, at k.ward@usyd.edu.au / 6129351 8743.
Makeafree website now with SynthaSite | Designed by Free CSS Templates